Mpanamboatra sy mpamatsy fantsom-panafody fiarovana fiarovana ara-pahasalamana any China | Hemeikaineng
Fonon-tànana fiarovana PVC fiarovana
Polyvinyl chloride, fantatra amin'ny anarana hoe PVC, dia polymer thermoplastic izay ampiasaina hitafy ny ivelan'ny fonon-tànana mba hiarovana amin'ny simika, ny punctures, ny fanapahana ary ny abrasion. Ity karazana fonon-tànana fiarovana ity dia ampiasaina amin'ny sehatr'asa maromaro hiarovana amin'ny loza mety hitranga. Ny karazana fonon-tànana PVC dia misy fonon-tànana fiarovana, fonon-tànana fitsaboana, fonon-tanana ary fonon-tànana indostrialy.
Ny fonon-tànana ara-pitsaboana dia fonon-tanana isan-karazany izay mety mifono PVC. Ny fiarovana amin'ny PVC dia manome fiarovana fanampiny amin'ireo otrikaretina azo avy amin'ny rà sy ranoka hafa amin'ny vatana, noho ny tanjaka mahery sy ny fanoherana ny puncture. Izy ireo koa dia tsy misy tara-tara, mahatonga azy ireo ho tonga lafatra amin'ny olona manana hoditra mora tohina. Ny mampiavaka an'io karazana fonon-tànana PVC io amin'ny hafa dia izy ireo manify manify, manome fahatsapana ny rantsan-tànana, amin'ny fiasana amin'ny fanjaitra sy zava-maneno hafa.
Ity vokatra ity dia malaza be amin'ny mpanjifa eran'izao tontolo izao, ary maro kokoa ny mpanjifa no mifandray aminay amin'ny fividianana betsaka. Ny vokatrao dia tsara kalitao ary ny vidiny dia mendrika ny kalitao. Raha mila santionany ianao dia afaka mifandray aminay aloha, afaka manome santionany izahay hanamarinana ny kalitao.
Vokatra: Fonon-tanana PVC fitsaboana azo alefa
Modely: Tsy misy vovoka
Loko: Tsy misy loko
Habe: S / M / L / XL
Antsipirian'ny fonosana: 100 pcs / boaty, boaty 10 / baoritra
Haben'ny boaty: 32 * 28 * 26cm
Taratasy fanamarinana: AK
Fampiharana: Ho an'ny fampiasana fitsaboana, tsy fandidiana
1. Famolavolana maimaim-poana amin'ny latsa, tsy misy proteinina vita amin'ny tany voajanahary.
2. Maimaimpoana ny akora simika. Tsy misy Carbamates, Thiazoles ary Thiurams.
3. PU anatiny nopetahana mba hanome mora.
4. Fanoherana anti-slip sy zero.
5. Famaranana malefaka noho ny fahatsapana ara-pahefana.
1. Ny vokatra dia nandalo CE, ISO fanamarinana.
2. Valio haingana ary manome serivisy feno sy feno fiheverana.
3. OEM / ODM.
Teo aloha: Saron-tànana kilasy indostrialy nitroka azo alefa
Manaraka: Fonon-tànana efitrano fidiovana madio vita amin'ny vinina
Fonon-tànana efitrano fidiovana madio vita amin'ny vinina
Fonon-tanana Latina maimaim-poana fitsaboana azo vonoina
Fonon-tanana fanadinana Vinyl fanary
Fonon-tanana Vine ankapobeny tanjona ampiasaina
Fonon-tanana fanadinana Nitrile fitsaboana azo alefa
Saron-tànana kilasy indostrialy nitroka azo alefa